पल शाहबारे भर्खरै आयो यस्तो अपडेट |
February 26, 2022 adminLeaveaComment on पल शाहबारे भर्खरै आयो यस्तो अपडेट
ना’बालिग ब,’लात्कार आरोपमा उ’जुरी परेपछि प्रहरीले अभिनेता पल शाहलाई खोजिरहेको छ। गत बुधबार दिउँसो जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँमा पलविरुद्ध जा’हेरी परेको हो।त्यही दिनदेखि प्रहरीले उनलाई पक्रन खोजिरहेको भए पनि अहिलेसम्म फेला परेका छैनन्। प्रहरीमा जा’हेरी दर्ता भएका दिन बुधबार साँझ काठमाडौंको कीर्तिपुरमा उनी अभिनित फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ को प्रिमियर शो थियो। तर उनी त्यहाँ गएनन्।
त्यही दिनदेखि उनी ह’राए। देशभर स’र्कुलर जारी गरेर प्रहरीले उनको खोजी ती’व्र पारेको छ। बिहीबार बिहान अभिनेता पलले फेसबुकमा केही अडिओ सार्वजनिक गर्दै आफूलाई फ’साइएको दा’बी गरेर स्टाटस लेखेका थिए।तर उनको मोबाइल अफ छ।
प्रहरीका अनुसार उनको मोबाइल अन्तिमपटक बुधबार राति साढे १० बजे बालकुमारीमा अन देखिएको छ। प्रहरीले मोबाइल ट्रे’स गर्दै बालकुमारी पुग्यो तर त्यहाँ उनी भेटिएनन्। खोजी जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यो पनि–अभिनेता पल शाहलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको जम्बो टोली परिचालन गरिएको फिल्डमा खटिएको बताइएको छ ।मुद्दा दर्तासँगै उनीविरुद्ध जिल्ला अदालत तनहुँले फागुन ११ मा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो ।पलको खोजीमा प्रहरीको ५ टोली परिचालन गरिएको छ ।केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, महानगरीय अपराध महाशाखा, परिसर ललितपुर र जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँको टोलीले उनीबारे अनुसन्धान गरिरहेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँले फागुन ११ मा उनको खोजतलासमा सहयोग गरिदिन महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो । पललाई पक्राउ गर्न काठमाडौंमा पत्राचार गरिएको तनहुँका एसपी राजेन्द्रबावु रेग्मीले बताए ।अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूका अनुसार उनी काठमाडौंमा लु’किछिपी हिँडिरहेका छन् ।
पल नेपाली चलचित्र तथा म्यूजिक भिडियोका लोकप्रिय अभिनेता हुन् ।प्रहरीको खोजीमा रहेका नायक पल शाहको तस्बिर अंकित टिशर्ट लगाएर नायिका पुजा शर्मा सिनेमा हलहरूमा पुगेकी छन् । आफूले निर्माण तथा अभिनय गरेको ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ को रिलिजका क्रममा आज उनी दर्शकको फ्लो हेर्न विभिन्न हलमा गएकी हुन् ।
सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा पुजाले फेरि एकपटक पललाई सम्झेर भावुक बनिन् । ‘सत्यको जित हुने’ भन्दै उनले पललाई कसैले केही गर्न नसक्ने दा’बीसमेत गरिन् ।पत्रकारले पुजालाई पलको तस्बिर अंकित टिशर्ट लगाएर हिँड्नुको कारण सोधेका थिए ।
पुजाले यसरी जवाफ दिइन् –‘खासमा भन्नुपर्दा पुजा भनेकै पलको पिल्लर हो । पुजाबिना पल अधुरो छ । पलबिना पुजा अधुरो छ । फिजिकल्ली यहाँ नभए पनि पल मेरो मनमा छ । मेरो साइडमा उभिएको छ । मलाई साथ दिइरहेको छ । मेरो काँधमा यसो गरिरहेको छ ।’
उनले थपिन्, ‘आफ्नो फिल्मलाई आफ्नो भनेर हिँड्न नपाउँदाको पी’डा मलाई थाहा छ । प्रेमगीत-२ मा म हिँड्न पाएको थिइनँ । अहिले पललाई के भइरहेको होला ? उसको फिलिङ्स के होला ? आज पल एकदम मिस भइरहेको छ । तर पनि हामी सँगै छौं ।
यो नै सबैभन्दा ठूलो जित हो । म बोल्दाखेरि मसँगै मेरो पल पनि जानुपर्छ ।’‘पललाई कसैले केही गर्न सक्दैन । यो मेरो हन्ड्रेड पर्सेन्ट विश्वास हो । सत्यको जित हुन्छ । एक न एकदिन पल आउँछ । दर्शक साथमा छन् भने कसैले केही गर्न सक्दैन ।
सबिता माताको खुलासा : पलसंग मेरो भविष्य कस्तो छ भन्दै गायिका पुगिन सबिता माताकोमा,दुईको भविष्यवाणी हेर्दै भनिन् यो हुनै सक्दैन(भिडियो)
एम्बुलेन्समा किन उल्टो (ECNALUBMA) लेखिन्छ?कसलाई थाहा छ कमेन्ट गर्नुहोस्,थाहा नहुनेले रहस्य जान्नुहोस्
सुर्खेत घटनामा DNA टेस्ट हुने भएपछि गंगा यति धेरै खुसी , गणेशकै बच्चा हो भन्नेलाई लाग्यो ठूलो झट्का-भिडियो हेर्नुहोस
भारतमा भयाभह बन्दै कोरोना, २४ घण्टामा यति धेरै संख्यामा मृत्यु, पुरा पढ्नुहोस